In these Terms and Conditions of Sale, "Seller" means Compact Myanmar Group Co., Ltd; "Buyer" means the person, firm, company or corporation by whom the order is given.
2.4Each order or acceptance ofaquotation for Goods will be deemed to be an offer by you to purchase Goods upon these conditions. You must ensure that the terms of your order are complete and accurate. The Contract is formed when the order us accepted by us, by way ofawritten acknowledgement of order or delivery.
2.5Subject to Condition 5, you may not cancel the Contract once we have accepted it.These Conditions may not be varied unless that variation is in writing signed by both you and our authorized representative. Our Agent is not permitted to agree variations to these Conditions unless each such variation is expressly authorized by us.
3.2 Prices are firm for delivery within the period stated in Seller's quotation and are exclusive of (a) Commercial Tax and (b) any similar and other taxes, duties, levies or other like charges arising outside Myanmar in connection with the performance of the Contract.
3.3 Prices (a) are for Goods delivered Seller’s shipping point, Including of freight, insurance and handling unless otherwise stated in the Seller's order confirmation.
4.1 We will invoice you for the Goods on or at any time before delivery. Payment is due in MYANMAR KYATS before delivery unless you have an approved credit account with us in which case you must pay in accordance with the terms of that account.
4.2 If any sum payable under the Contract is not paid when due them without prejudice to our other rights under the Contract, that sum will bear interest from the due date until payment is made in full, both before and after any judgment, at 4% of annum over KBZ bank base rate from time to time and we will be entitled to suspend deliveries of the Goods until the outstanding amount has been received by us and you will also be responsible for any reasonable bank charges, or other third party commission charges or other costs that we have incurred.
4.3 Payment shall be made
(A) Unless agreed otherwise, our invoices are to be paid immediately upon receipt of Goods and Services. Should buyer fail to comply within 30 days, he will automatically be in default of payment.
4.4 Where Goods need to be ordered by us, we may require you to payadeposit ofareasonable amount determined by us on account of the price. Your deposit will be deducted from the outstanding price of the Goods.
5. YOUR RIGHT TO CANCLE GOODS ORDERED
5.1 When we accept your order, we will give you an approximate date when the Goods will be available for delivery or collection and will keep you informed of any change to such date.
5.2 Goods which have not been specially ordered can be returned for credit up to7days from the date of sale and on production of the relevant invoice provided they are in the original packaging and remain inasuitable condition for resale. No Goods may be returned for credit after7days from the date of sale. We reserve the right to changeahandling fee of 15% of the value of all items returned within7days of sale.
5.3 The following Goods may not be returned to us for credit:
6.1 We will deliver the Goods to you using our normal delivery service or, at your request, by making them available for collection from our Agent. You agree to accept deliver of the Goods or to collect your Goods when you are informed that the Goods are available for collection. Delivery of Goods shall be deemed to have taken place when they are delivered to you or made available for collection.
6.2 Should you be unable for good reason to use our normal delivery service or to collect the Goods, we may arrange for delivery to take place at an address to be agreed with you. We reserve the right to chargeareasonable fee for this service.
7.1The following provisions and the provisions of the warranty in Condition set out the entire liability of us (including any liability for the acts or omissions of our agents) to you in respect of:
7.2 Subject only to Condition above, we will not be liability for any loss or damage whatsoever arising from any default which is due to any act of God, war, strike, lock out industrial action, fire, flood or any event beyond our reasonable control.
8.1 By submitting your order you allow us to use your personal details for the purposes of supplying goods (including passing your details on to couriers and the subcontractors) and for marketing purposes. We will not use your details for other purposes without asking your consent.
8.2 If any parts of this Contract is held to be invalid, it will not affect the validity or enforceability of the rest of the Contract.
8.3 The formation, construction, performance, validity and all aspects of the Contract are governed by Myanmar law and the parties submit to the exclusive jurisdiction of the Myanmar courts.
အောက်ပါ အရောင်းစည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်များနှင့် အခြေအနေများတွင်“ရောင်းချသူ (Seller) ”ဆိုသည့် စကားရပ်တွင် Compact Myanmar Group Co,.Ltdဖြစ်ပြီး“ဝယ်ယူသူ(Buyer)”ဆိုသည့် စကားရပ်တွင်ကုန်ပစ္စည်းဝယ်ယူလိုသောလူ၊ ပုဂ္ဂိုလ်၊ စီးပွားရေးလုပ်ငန်း၊ အသေးစားကုမ္ပဏီ (သို့) ပေါင်းစပ်ဖွဲ့စည်းထားသောအဖွဲ့အစည်းများကိုဆိုလိုပါသည်။
၂-၁။ ပစ္စည်းမှာယူမှုများအားလုံးသည် စာဖြင့်မှာယူရမည်ဖြစ်ပြီးအောက်ပါအရောင်းစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများကိုလက်ခံသဘောတူရမည်ဖြစ်မည်။ရောင်းသူနှင့် ဝယ်ယူသူကြားတွင် စာဖြင့်သဘောတူညီထားသောအရောင်းစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများမှလွဲ၍ဝယ်ယူသူ၏ဘက်မှ တင်ပြလာသောအဆိုပြုစည်းမျည်းစည်းကမ်းများ၊ ကိုယ်စားပြုမှုများ၊ အာမခံချက်၊ အာမခံမှုများ၊ အခြားဖေါ်ပြချက်များ၊ ဈေးနှုန်းကမ်းလှမ်းလွှာတွင် မပါရှိသောစကားလုံးများအားထည့်သွင်းစဉ်းစားမည်မဟုတ်ပါ။
၂-၂။ ဤစာချုပ်သည် ဝယ်ယူသူဘက်မှ ရောင်းသူ၏ဈေးနှုန်းကမ်းလှမ်းလွှာကိုသဘောတူညီပြီးအမှာစာပေးပို့သည့် အချိန် (နေ့)မှစ၍ စတင်အကျုံးဝင်ပါသည်။
၂-၃။ ရောင်းသူဝယ်သူနှစ်ဦးစလုံးသဘောတူလက်မှတ်ရေးထိုးထားမည်ဆိုပါကစာချုပ်နှင့်ပတ်သက်သည့် မည်သို့သောပြောင်းလဲပြင်ဆင်မှုမျိုးကိုမဆိုပြောင်းလဲပြင်ဆင်ခွင့်ရှိမည်မဟုတ်ပါ။ မည်သို့ပင်ဆိုစေရောင်းသူအနေဖြင့် အရည်အသွေးကောင်းမွန်သော၊ ပျက်စီးမှု၊ ထိခိုက်ထားမှုမရှိသောပစ္စည်းများကိုသာထောက်ပံ့ပေးထားပြီးကုန်ပစ္စည်းမပို့ခင်အချိန်ကတည်းကပင် အသေးစားပြင်ဆင်ထားသော၊ ပြုပြင်ထားသောပစ္စည်းများကိုဖယ်ထားပြီးဖြစ်ပါသည်။
၂-၄။ ဝယ်ယူသူများအနေဖြင့် ကုန်ပစ္စည်းမှာယူခြင်း (သို့မဟုတ်) ဈေးနှုန်းကမ်းလှမ်းလွှာကိုလက်ခံခြင်းများသည် ကျွနု်ပ်တို့ကုမ္ပဏီအနေဖြင့် လူကြီးမင်းတို့မှ အောက်ပါစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်များကိုသဘောတူလက်ခံ၍ ကုန်ပစ္စည်းဝယ်ယူရန် ကမ်းလှမ်းချက်တစ်ခုဖြစ်ကြောင်းယူဆပါသည်။
၂-၅။ အပိုဒ် (၅) ပါ ဖေါ်ပြချက်များအရဝယ်ယူသူအနေဖြင့် ဤစာချုပ်ပါစည်းကမ်းချက်များကိုပယ်ဖျက် ပိုင်ခွင့်မရှိပါ။ ဤအရောင်းစည်းကမ်းချက်များသည် ဝယ်ယူသူနှင့် ကျွန်ုပ်တို့ ကုမ္ပဏီကြားတွင် ရေးထိုးထားသောသဘောတူညီချက်ဖြစ်သည့်အတွက်မည်သို့သောအကြောင်းပြချက်ဖြင့် ဝယ်ယူသူနှင့် ကျွနု်ပ်တို့၏အရောင်းဝန်ထမ်းများအနေဖြင့် မည်သို့သောပြောင်းလဲပြင်ဆင်မှုမျိုးကိုမဆိုလက်ခံမည်မဟုတ်ပါ။
၃။ ဈေးနှုန်းကမ်းလှမ်းလွှာကန့်သတ်ချက်နှင့် ဈေးနှုန်းသတ်မှတ်ချက်
၃-၁။ ပစ္စည်းမှာယူသည့်နေမှစ၍ ရက်(၁၄)အတွင်းသာရောင်းသူအနေဖြင့် ဈေးနှုန်းကမ်းလှမ်းလွှာတွင် ဖေါ်ပြထားသောဈေးနှုန်းအတိုင်းလက်ခံမည်ဖြစ်ပြီးသတ်မှတ်ထားသောရက် ကျော်လွန်ပါကယခင်ကလက်ခံဖေါ်ပြထားသောဈေးနှုန်းကိုရုတ်သိမ်းမည်ဖြစ်ကြောင်းအသိပေးအပ်ပါသည်။
၃-၂။ ရောင်းသူ၏ ဈေးနှုန်းကမ်းလှမ်းလွှာသတ်မှတ်ကာလအတွင်းအောက်ဖေါ်ပြပါအကြောင်းများမရှိပါကဈေးနှုန်းပြောင်းလဲမည်မဟုတ်ပါ။ (က) ကုန်သွယ်ခွန်၊ (ခ) အလားတူအခွန်များ၊ အကောက်ခွန်များ၊ စည်းကြပ်ခြင်းများ (သို့) စာချုပ်လုပ်ဆောင်ချက်များနှင့် ပက်သတ်၍ မြန်မာပြည်ပြင်ပမှ ထွက်ပေါ်လာသော (ကုန်ကျငွေ) အခွန်အခများအားလုံးပါဝင်ပါသည်။
၃-၃။ ရောင်းသူ၏ ပစ္စည်းမှာယူမှု အတည်ပြုချက်ထဲတွင်လည်းဖေါ်ပြထားပြီးဖြစ်သော (သို့မဟုတ်) သတ်မှတ်ထားသောဝန်ဆောင်ခများ၊ အာမခံကြေးများ၊ လေယာဉ်၊ သင်္ဘောဖြင့် ကုန်စည်ပို့ဆောင်ခြင်းများအတွက် ဈေးနှုန်းများကိုသတ်မှတ်ထားပြီးဖြစ်ကြောင်းလူကြီးမင်းများအားအသိပေးထားအပ်ပါသည်။
၄-၁။ ကျွန်ုပ်တို့ရောင်းသူများအနေဖြင့် ကုန်ပစ္စည်းများကို Delivery မပို့ခင် ကုန်ပို့လွှာကိုလူကြီးမင်းတို့အားအရင်ဆုံးပေးပို့ပါမည်။ စာချုပ်အရလူကြီးမင်းအနေဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့နှင့် ကြိုတင်သဘောတူညီထားသောငွေပေးချေမှုမရှိခဲ့လျှင် ကုန်ပစ္စည်းမပို့မီ မြန်မာကျပ်ငွေဖြင့် ငွေပေးချေရမည်ဖြစ်ပါသည်။
၄-၂။ စာချုပ်ပါစည်းကမ်းများအရလူကြီးမင်းတို့အနေဖြင့် ပေးရန်ကျန်ရှိသောလက်ကျန်ငွေကိုသတ်မှတ်ထားသောရက်အတွင်းငွေပေးချေမှုမရှိခဲ့လျှင် လက်ကျန်ငွေအပေါ်တွင် KBZ Bank ၏ နှစ်စဉ်အတိုးနှုန်းအပေါ်(4%)ထပ်မံပေါင်းထည့်၍ ပေးချေရမည်ဖြစ်ပါသည်။ရောင်းသူအနေဖြင့် ငွေလက်ကျန်ပေးချေမှုမရှိမချင်းကုန်ပစ္စည်းကိုခေတ္တဆိုင်းငံ့ထားပိုင်ခွင့်ရှိသည်။ လူကြီးမင်းတို့အနေဖြင့် ငွေပေးချေမှုနောက်ကျခြင်း (သို့မဟုတ်) ပေးချေမှုမရှိခြင်းကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာသောနောက်ဆက်တွဲဘဏ်ဝန်ဆောင်မှုအတွက် ကုန်ကျစရိတ်များ၊ အခြားကုန်ကျစရိတ်များကိုလူကြီးမင်းတို့ဘက်မှ ပေးချေရန် အပြည့်အဝတာဝန်ရှိပါသည်။
၄-၃။ ငွေပေးချေမှုနှင့်ပက်သက်၍ ကျွနု်ပ်တို့ကုမ္ပဏီနှင့် ကြိုတင်သဘောတူညီမှု တစ်စုံတရာမရှိခဲ့လျှင် ကုန်ပစ္စည်းနှင့် ဝန်ဆောင်မှုများလက်ဝယ်ရရှိသည်နှင့်တပြိုင်နက် ဝယ်သူအနေဖြင့် ငွေပေးချေမှုပြုလုပ်ရပါမည်။ ဝယ်ယူသူအနေဖြင့် ရက်(၃၀)ထက်ကျော်လွန်၍ ငွေပေးချေမှုမရှိပါကတရားဥပဒေနှင့်အညီငွေတောင်းခံမှုပြုလုပ်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်းအသိပေးအပ်ပါသည်။
၄-၄။ လူကြီးမင်းတို့မှ အထူးမှာယူလိုသောကုန်ပစ္စည်းများအတွက် မှာယူလိုသည့် ကုန်ပစ္စည်းတန်ဘိုး၏ ၅၀%ကို ကြိုတင်ပေးချေရမည်ဖြစ်ပါသည်။
၅-၁။ လူကြီးမင်းတို့အနေဖြင့် ဝယ်ယူထားသောပစ္စည်းများအား ပြန်လည်ပေးအပ်ခြင်း ( Return )၊ လဲလှယ်ခြင်း ( Exchange ) များအတွက် အထူးမှာယူထားသောပစ္စည်း ( Special Order ) များမှလွဲ၍ကုန်ပစ္စည်းများကိုမူလထုပ်ပိုးထားသောအခြေအနေနှင့် ပြန်လည်ရောင်းချနိုင်ရန် သင့်လျော်မှုရှိသောအခြေအနေများရှိပါကမူလဝယ်ယူထားသောနေ့မှစ၍ တစ်ပတ်အတွင်းမူလကုန်လက်ခံပြေစာ (Orginal Invoice ) နှင့်အတူပြန်လည် လဲယူခြင်း ( Exchange ) သို့မဟုတ် ပြန်လည်ပေးအပ်ခြင်း ( Return ) များအတွက် ပစ္စည်းပြန်ဝယ်ယူခွင့်လက်မှတ် ( Credit Note ) ကို ပြန်လည်ပေးအပ်မည်ဖြစ်ပါသည်။ တပတ်အတွင်း ပြန်လည်ပေးပို့ လာသောကုန်ပစ္စည်း (Items) များအားလုံးတန်ဖိုး၏ ( 15% ) ကိုလည်း ပြန်လည်ဝန်ဆောင်ခအဖြစ် သတ်မှတ်ထားမည် ဖြစ်ကြောင်းအသိပေးအပ်ပါသည်။ထိုသို့ ပြန်လည်ပေးအပ်ရာတွင် လူကြီးမင်းတို့ဘက်မှ စိတ်ပြောင်း၍ ( Change the Mind ) ကုန်ပစ္စည်းများအား ပြန်လည်ပေးအပ်ခြင်း ( သို့မဟုတ် ) လဲလှယ်ခြင်းများအတွက် (၇)ရက်ထက်ကျော်လွန်သောကုန်ပစ္စည်းများကိုမည်သို့သောအကြောင်းဖြင့်ဖြစ်စေ ပြန်လည်လဲယူခြင်း၊ ပြန်လည်ပေးအပ်ခြင်းများ ပြုလုပ်ခွင့်ရှိမည် မဟုတ်ပါ။
၅-၃။ ကျွနု်ပ်တို့ ပြန်လည်လက်ခံ၍မရနိုင်သောပစ္စည်းများမှာအောက်ဖေါ်ပြပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည်။
(က) လူကြီးမင်းတို့ကိုယ်တိုင်တောင်းဆို၍ အထူးမှာယူထားသောကုန်ပစ္စည်းများ
(ဂ) မှန် ( သို့မဟုတ် ) ဖန်နှင့်ဆိုင်သောအစိတ်အပိုင်းများ
(ဃ) ချိတ်ပိတ်ထားရာတွင် ပကတိအတိုင်းမရှိသော (သို့)ခြေရာလက်ရာပျက်နေသောအန္တရာယ်ရှိသည့် ကုန်ပစ္စည်းအစိတ်အပိုင်းများး
(င) မူလအတိုင်းထုပ်ပိုးထားခြင်းမရှိသည့် ပေါက်ကွဲစေတက်သော ( သို့မဟုတ် ) အန္တရာယ်ရှိသည့် ကုန်ပစ္စည်း၏မည်သည့်အစိတ်အပိုင်းကိုမဆိုဆိုလိုသည်။
(စ) တပ်ဆင်ထားပြီးသော ( သို့မဟုတ် ) အသုံးပြုပြီးသောကုန်ပစ္စည်းများ
(ဆ) မူလထုပ်ပိုးထားမှု ပုံစံပျက်နေသော၊ ပြန်လည်ရောင်းချ၍မရနိုင်သောကုန်ပစ္စည်းများ
(ဇ) အပြိုင်အဆိုင် ရောင်းဝယ်ဖေါက်ကားထားသော၊ Promotion ပေးထားသောကုန်ပစ္စည်းများ
(ဈ) ကျွန်ုပ်တို့၏အရောင်းဝန်းများထံမှ လူကြီးမင်းတို့ကိုယ်တိုင်ရွေးထုတ်ထားသည့် မည်သို့သောကုန်ပစ္စည်းကိုမဆိုဆိုလိုပါသည်။
၆-၁။ လူကြီးမင်းတို့အနေဖြင့် မှာယူထားသောကုန်ပစ္စည်းများရောက်ရှိချိန်တွင် ကျွန်တော်တို့၏ ကုမ္ပဏီဘက်မှ ပုံမှန်ကုန်ပစ္စည်းပို့ဆောင်ခြင်းဝန်ဆောင်မှု ( Normal Delivery Service ) အသုံးပြု၍ လူကြီးမင်းတို့၏ ကုမ္ပဏီ၊ ဆိုင် (သို့) နယ်ဝေးမှဖြစ်ပါကသက်ဆိုင်ရာကားဂိတ်အရောက် ပို့ဆောင်ပေးမည်ဖြစ်ပါသည်။ လူကိုယ်တိုင်လာရောက်၍လည်း ကျွန်တော်တို့၏ အရောင်းဝန်ထမ်းများထံတွင် လာရောက်ထုတ်ယူနိုင်ပါသည်။ လူကြီးမင်းတို့ဘက်မှ ခိုင်လုံသောအကြောင်းပြချက်တစုံတရာပေးနိုင်ခြင်းမရှိပဲ ကျွနု်ပ်တို့ ကုမ္ပဏီမှ ပေးအပ်သောပုံမှန်ပစ္စည်းပို့ဆောင်ခြင်းဝန်ဆောင်မှု ( Normal Delivery Servise ) သို့မဟုတ် လာရောက်ရွေးယူခြင်း ( Collect Goods ) များကိုအသုံးမပြုလိုပါလျှင် လူကြီးမင်းတို့ကိုယ်တိုင် ရွေးချယ်ထားသောအသုံးပြုလိုသည့် ဝန်ဆောင်မှုများအတွက် ကုန်ကျစရိတ်များကိုလူကြီးမင်းတို့ဘက်မှ ပေးချေရမည်ဖြစ်ပါသည်။
၇-၁။ အောက်ဖေါ်ပြပါ ပြဌာန်းချက်များနှင့်ပက်သက်၍ လူကြီးမင်းတို့ဘက်မှ လေးစားတာဝန်ယူမှု မရှိခဲ့လျှင် ကျွန်တော်တို့ ကုမ္ပဏီဘက်မှ အာမခံနှင့်ပက်သတ်သော ပြဌာန်းချက်များကိုတာဝန်ယူဖြေရှင်းပေးမည် မဟုတ်ပါ။
၇-၁-၁။ လူကြီးမင်းတို့ဘက်မှ ယခုစာချုပ်ပါ စည်းကမ်းချက်များကိုဖေါက်ဖျက်ခြင်း။
၇-၁-၂။ စာချုပ်နှင့်ပက်သက်၍ မည်သို့သောပေါ့ဆမှု၊ လစ်လျူရှု့ခြင်းများအပါအဝင် ထိန်ချန်ထားခြင်းများ (သို့) သွေဖီတိမ်းစောင်းသောအပြုအမူ၊ လုပ်ဆောင်ချက် (သို့) ဖေါ်ပြချက်များနှင့်ပတ်သက်သောကိုယ်စားပြုမှုများ
၇-၂။ အထက်ပါသတ်မှတ်ချက် အခြေအနေများအရမီးလောင်ခြင်း၊ ရေကြီးခြင်း၊ စက်ရုံအမှားကြောင့်ဖြစ်ခြင်း၊ သပိတ်မှောက်ခြင်း၊ စစ်ဖြစ်ခြင်း၊ ဘုရားသခင်၏အလိုတော်အရမည်သို့သောထိန်းချုပ်တားစီး၍မရနိုင်သောသဘာဝဘေးအန္တရာယ်များကြောင့် ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုများကို ကျွန်ုပ်တို့ရောင်းသူများအနေဖြင့် တာဝန်ယူမည်မဟုတ်ကြောင်းအသိပေးအပ်ပါသည်။
၈-၁။ လူကြီးမင်းတင်ပြတောင်းဆိုထားသော (Order)များအတွက် ကျွန်ုပ်တို့အနေဖြင့် ယင်းပစ္စည်းများလူကြီးမင်းထံသို့ အရောက်ပို့ဆောင်နိုင်ရန်အတွက် လူကြီးမင်း၏ Personal အချက်အလက်များကိုအသုံးပြုခွင့်ပြုရန် အသိပေးအပ်ပါသည်။ (တဆင့်ခံကန်ထရိုက်တာများမှင့် ကုန်ပစ္စည်းပေးပို့သူများအတွက် လူကြီးမင်း၏ Personal အချက်အလက်များအသိပေးထားခြင်းအပါအဝင်) ကျွန်ုပ်တို့အနေဖြင့် လူကြီးမင်း၏ ခွင့်ပြုချက်မရရှိပါပဲလူကြီးမင်းနှင့် သက်ဆိုင်သော Personal အချက်အလက်အသေးစိတ်များအားအခြားသောရည်ရွယ်ချက်များအတွက် အသုံးပြုလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။
၈-၂။ စာချုပ်ပါအချက်အလက်များနှင့် ပတ်သက်၍ တရားမဝင်ဆောင်ရွက်ခဲ့လျှင်၊ တရားမဝင်မှုများ (သို့မဟုတ်) စာချုပ်အားအတည်ပြုရပ်နားနိုင်စွမ်းစသည့် မည်သို့သောအကျိုးကျေးဇူးမှ ရရှိလိမ့်မည်မဟုတ်ကြောင်းအသိပေးအပ်ပါသည်။
၈-၃။ စာချုပ်အရဖွဲ့စည်းပုံ၊ တည်ဆောက်ပုံ၊ ဆောင်ရွက်ပုံ၊ တရားနည်းလမ်းကျခြင်းနှင့် စာချုပ်ပါအချက်အလက်အသီးသီးသည် မြန်မာနိုင်ငံ (တရားရုံး)၏ သီးသန့်တရားစီရင်ပိုင်ခွင့်တွင် ဖေါ်ပြထားပြီး မြန်မာနိုင်ငံဥပဒေ၌အတည်ပြုထားပြီးဖြစ်ကြောင်းအသိပေးအပ်ပါသည်။